လစာထက်အရေးကြီးတာ ဘာရှိသေးလို့တုန်း – Live the Dream
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံလို့ အလုပ်အကိုင်အကြောင်းတွေဆွေးနွေးဖြစ်ကြရင် လစာကိစ္စကတော့ ပါလာစမြဲပဲမဟုတ်လား? ဘယ်အလုပ်အကိုင်တော့ အခုအချိန်မှာခေတ်စားနေတယ်…ဘယ်လိုဝင်ငွေမျိုးရနိုင်တယ်၊ ဒီထက်လစာကောင်းအောင်အလုပ်ပြောင်းမယ်၊ နိုင်ငံခြားထွက်မယ် စသည်ဖြင့် လစာကိုအခြေခံပြီး စကားလက်ဆုံဆွေးနွေးခြင်း topics တွေက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လစာက ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့၊ လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သလို အလုပ်လုပ်မလုပ်ခင် အဓိကထည့်စဉ်းစားရမယ့်အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ အိမ်မက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင် လစာကောင်းရဖို့နဲ့ လစာအပြင် နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုရော လေးလေးနက်နက် တွေးမိရဲ့လား??
ဒီနေ့မင်မင်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်း သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်အတွက် လစာရဲ့အရေးကြီးခြင်းပါပဲ..ဒါပေမယ့် လစာကောင်းရဖို့ နောက်မှာ ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေ၊ လစာအပြင်ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြသွားချင်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေရော၊ အလုပ်ခွင်ထဲကလူငယ်တွေရော အသိတစ်ခု ရလာဖို့အတွက် အချိန် ငါးမိနစ်စာ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…
၁။ ယူတဲ့အတိုင်း ပေးရမယ်
ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူ အေးအေးဆေးဆေးနှပ်ပြီး လုပ်ရတယ်လို့အပေါ်ယံ ထင်နေကြတယ်ဆိုရင် အဲ့သည်အတွေးအခေါ်က မှားနေပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ လိုအပ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းတွေရှိလာအောင် အမှန်တကယ် အားစိုက်ကြိုးစားရတယ်၊ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတယ်။ work-life balance မညီအောင် အလုပ်အတွက် လေ့လာရတာမျိုးတွေလုပ်ရပါတယ်။ ဒီလိုပေးဆပ်မှုတွေရှိမှ မိမိရဲ့ အရည်အချင်းတွေမြင့်မားလာပြီး အလုပ်ခွင်မှာရှိတဲ့ မိမိရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့လစာမျိုးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်အကိုင်က လစာကောင်းတယ် လုပ်ရင်ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ချင်တဲ့အဆင့်က မတက်ပဲ အမှန်တကယ် အားစိုက်လုပ်ဆောင်မှုမရှိသေးရင်တော့ ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ထပ်တူကျတဲ့ ဝင်ငွေကိုပဲရရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လစာကောင်းရချင်ရင် မိမိရဲ့ ပြင်ဆင်အားထုတ်မှုတွေက တော်ရုံတန်ရုံမက လိုအပ်ပါတယ်နော်…ဒီ concept ကို တော့ အရင်ဆုံး ထည့်ထားဖို့ပြောပါရစေနော်..
၂။ မလုပ်ခင် လေ့လာပါ
လစာနဲ့ပတ်သက်လို့ လွှဲနေကြအရာတစ်ခုရှိပါတယ်…အဲ့ဒါက အလုပ်ခွင်ထဲရောက်သွားတယ်. တောင်းဆိုတဲ့လစာက တကယ့်ရသင့်တဲ့လစာထက်နည်းနေလို့ နောင်တရနေတာမျိုးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ညီတဲ့ လစာမှ မရရင် ဘယ်သူက ပျော်နိုင်ပါ့မလဲ? ဒီပြဿနာရဲ့အခြေအမြစ်က အလုပ်စလျှောက်ထဲက လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Research လုပ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Junior level ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ? Senior Level ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာ ကိုသေချာမလေ့လာထားတော့ ပေးချင်သလိုပေးဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ဆုံးရှုံရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် အလုပ်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ Junior level များရော၊ အလုပ်ပြောင်းမယ့် သူများအတွက်ပါ ကိုယ်ဝင်လုပ်မယ့်အလုပ်အကိုင်တွေရဲ့ လစာနှုန်းထားများကို research များများလုပ်ထားပါ။ လစာနိမ်ပြီးပေးတယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပဲလို့ပြောလိုက်။ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ဖို့ လစာကအရေးကြီးတယ်လေ.ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
လစာအပြင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းတွေရောက်လာပါပြီ…။ ကျောင်းတွေပြီးလို့ အလုပ်ခွင်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး မိမိနဲ့အများဆုံးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ့်သူတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲအရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။ တံငါနားနီးတံငါတဲ့.. အချိန်ကြာလာရင် ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုနဲ့အတူ အကျင့်တွေကူးစက်လာတာမျိုး၊ အသွင်တူလာတာမျိုး၊ ပုံသွင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် ဘေးနားမှာအတူတူအချိန်ကုန်မယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ရဲဖော်ရဲဖက်တွေ၊ အကြီးအကဲတွေ စသည်ဖြင့် ချုံငုံပြောရရင် အလုပ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းဖို့ ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို Motivate ဖြစ်စေတဲ့နေရာ၊ work life balance ဖြစ်တဲ့အလုပ်ခွင်၊ ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကို ရသင့်သလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးတဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ့်အတွက် network အများကြီးရှိလာနိုင်မယ့်အလုပ်အကိုင်၊ အများအတွက် အဆိပ်မဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ စတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေကသာ မိမိဘဝတိုးတက်မှုအတွက် မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဝင်ငွေသာကောင်းတယ် ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်း ဒီအလုပ်ထဲကို မဝင်မိစေဖို့၊ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ကိုလည်း အကြံပေးပါရစေ..
၄။ တိုးတက်ဖို့အာမခံ လား?
အလုပ်ထဲရောက်ရင် လုပ်ငန်းခွင် လည်ပတ်ဖို့ ကိုယ့်အနေနဲ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက်လည်း အလုပ်ခွင်ထဲမှာသင်ယူသွားရမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့အလုပ်အကိုင်တွေမှာ မိမိအတွက် လစာကောင်းမပေးနိုင်ပေမယ့် လစာအတော်အတန်နဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ၊ အသိပညာတွေကို များစွာပေးနိုင်တာမျိုးရှိပါတယ်။ ဝင်ငွေက အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ personal တိုးတက်မှုအတွက် ဖြည့်ဆည်းရမယ့်အတွေ့အကြုံတွေ၊ အသိပညာတွေ၊ Skills တွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက မိမိရဲ့အနာဂတ်အတွက် ငွေကြေးထက်ပိုပြီး အသုံးချနိုင်မယ့်အရာ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိရဲ့ အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်မှုတွေမှာ လစာနဲ့ personal growth ယှဉ်လာရင်တော့ လစာအတော်အတန်နဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဦးစားပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်..
လစာအပြင် ထပ်စဉ်းစား ဘာများလဲ? နံပါတ်တစ်.. location။ အလုပ်က ကိုယ်နဲ့အဝေးကြီးမှာ ဆိုပါစို့ အလုပ်သွားဖို့ကားတွေ အဆင့်အဆင့်စီးရမှာတော့အသေအချာပဲ။ ကားတွေတိုးစီး.. ကားတွေကပိတ် ကားစီးရတာနဲ့တင် လူက ပင်ပန်းနေပြီး အလုပ်ရောက်တော့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို လန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်နိုင်ပါ့မလဲ? အလုပ်ပြန်လို့ အိမ်ရောက်တော့လည်း ညဉ့်နက်မိုးချုပ်လို့ အဆင်မပြေလှဘူး။ ဒါ့ကြောင့် Location က လစာအပြင်စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတစ်ခု။ ဒါ့အပြင် မိမိရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်၊ ရုံးပိတ်ရက် စတဲ့ခံစားခွင့်တွေလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်ချိန်တွေ၊ ရုံးမှာကျင့်သုံး စည်းကမ်းတွေက လိုက်နာနိုင်ရဲ့လား.. ကိုက်ညီရဲ့လား ဆိုတာကိုပါ. ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်က မနက် ၇ နာရီ၊ ကိုယ်အိပ်ရာထနိုင်တဲ့အချိန်က ၈ နာရီ ဆိုလည်း မကိုက်ညီလှဘူးလေ..နောက်ဆုံးအရာတွေအနေနဲ့တော့ တတိယအချက်က ပြောခဲ့သလို အလုပ်လုပ်မယ့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊အနာဂတ်တွေ၊ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မယ့် team mate တွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်စေနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ မိမိရဲ့ Passion လား?
မိမိရဲ့အလုပ်က ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမကိုက်ညီဘူးဆိုပါစို့..အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်မှုမှာ မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်တယ်ဆိုပါစို့.. မိမိရဲ့အလုပ်ကို Passion မဖြစ်ပေမယ့်လည်း မိမိရဲ့အခြေအနေကြောင့် မဖြစ်မနေရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ခုရွေးချယ်တဲ့အလုပ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Passion အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအရင်းအနှီးတွေကို စုဆောင်းလို့ရပါတယ်။ Passion ကို တစ်ခြားသောနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုတွေ မှားနေရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်။ သတိထားရမှာကတော့ မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်ရတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေမှာ နှစ်မြှပ်မသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသာရပြီး ပျော်ရွင်မှုမရှိရင်၊ အလုပ်လုပ်ရတာတကယ်စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိရင်လည်း အလုပ်လုပ်ရတာ ငြီးငွေ့လာခြင်းနဲ့အတူ မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာပြီး မှားယွင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုဒဏ်ကို ခံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်သာရွေးချယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကို ရေတိုအဖြစ်နဲ့သာလုပ်ဆောင်ပါ။ တစ်နှစ်တန်သည်.. နှစ်နှစ်တန်သည် ကြိုးစားပြီး မိမိရဲ့ စိတ်အားထက်သန်ရာလမ်းကြောင်းကို ပြန်လည် ရုန်းထွက်နိုင်ပါစေနော်..